Posted by Yangon Popular Real Estate
Kabaraye Pagoda Road, Pyay Road, U Wai Zar Ra Road Area -5Acre (or) 10 Acre အဝယျရှိသညျ။ U Kyaw Win - Word Link Real Estate 09 5152412
Yangon Popular Real Estate
Need for rent, Lounge, Bar, Kamaryut, History, Room '' Green Home''095114707,09254134178.
Looking for Land - 1,000 Lakh
Land is available Use 1000 Lakhs. '' GH GreenHome '' 095114707.09254134178.
Posted by Zin Mar Lwin
168 ကနျြစဈမေးတငျ ၁၅၃ ၁၅၄ ၁၄၆ ၁၄၇ လှျောကားမေးတငျ လှျောကားကြောကပျလကျရှိပေါကျစြေးအတိုငျးဝယျပါမညျ။ အရောငျးကိုယျစားလှယျ အရောငျးပိုငျရှငျမြားဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။ လငျးပွညျ့သူ အိမိခွံမွေ နှငျ့ ဆောကျလုပျရေး 09250393132
အရှဒေ့ဂုံ ၁၁၈ ၁၁၉ နထေိုငျရနျအဝယျရှိပါတယျ အရောငျးပိုငျရှငျမြား အရောငျးကိုယျစားလှယျမြားဆကျသှယျနိုငျပါတယျ လငျးပွညျ့သူ အိမျခွံမွေ နှငျ့ ဆောကျလုပျရေး ၀၉၂၅၀၃၉၃၁၃၂
Looking for Landed House -6Lakh
Posted by Home Group Real Estate&Law Service
34 Ward (or) 35 Ward (or) 36 Ward (or) 37 Ward, North Dagon Township 09795517415...09773264499..09964310584...0943105844
Kyauk Myaung, Myittar Nyunt, Tamwe Township
Looking for Landed House - 20 Lakh
Posted by T G Real Estate
T G Real Estate
Than Lyin , Star City Condo The owner of the data Contact brokers အကွမျးထညျပိုကွိုကျသညျ 09773264499...0943105844. 09892007224.. 09964310584
Looking for Landed House - 2,500 Lakh
South Okkalapa Township Near Parami Road & Waizayantar Road Price - 2500 Lakh / 3000 Lakh (between) အကြိုးဆောငျမြားလဲအကြိုးတူဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။ Ph_09964310584---09773264499---09795517415---09892007224
Posted by Asian Acre Advisors
Rent space for Co working Contact to - 09426066699
Looking for Commercial - 100,000 Lakh
Posted by Sai Sai
want to buy some house
Dagon Myothit (North) The owner of the data Contact brokers
Posted by Ko Yan Min Aung
Thaketa, Aye Yar Won St Landed House For Rent A Flat For Rent Contact Us - 09420100074 (Broker)
Ko Yan Min Aung
Posted by Ko Thein Htun
I want to buy land at Pa Zun Daung & Botataung township, which can go in and out container truck. Please contact to 095933734 09775033734
Ko Thein Htun
Looking for Land - 2,500 Lakh
Posted by Aung Pyae
Ahlone, Kyeemyindaing 2500 lakh 3000lakh 09.447700048
Posted by Aung Ta Khon
အဝယ်​ တိုက်​ရိုက်​ ပါ သီလဝါ သန်​လျင်​ စက်​မှု​မြေ ဖြစ်​ရမယ်​ ​မြေ ၁ ဧက မှ ​ကျော်​လဲ ရတယ်​ ဂို​ဒေါင်​ 80×100 အနဲ ဆုံး ပါမယ်​ အရှုပ်​အရှင်း ကင်းရမယ်​ လုပ်​ငန်း လည်​ပက်​​နေသူမို့. ပြန်​လည်​ ​ တည်​​ဆောက်​ရမှာ​တွေ အချိန်​မရပါ။ ​ကွန်​တိန်​နာ ကား .ဝင်​ထွက်​ ရမယ်​ ​ပေါက်​​ဈေးသုံးမည်​ အမြန်​ဝယ်​မည်​။ အကျိုးတူများ ဆက်​သွယ်​နိုင်​သည်​။ 09778781752
Looking for Land - 200 Lakh
Posted by Ko Ko Maung
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း အ၀ယ် တိုက်ရိုက်ပါ။ 200 ၀န်းကျင် အ၀ယ် ပါ ။ ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ဦးစားပေးမည် သို့ မဟုတ် အကျိုး ဆောင်နှင့် ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အသိ ဦးစားပေးမည်။ ဆက်သွယ်ရန်-09695408788
Looking for Landed House -5Lakh
Posted by MP Real Estate Service
South Okkalapa Township.2BR,ကားရပ်ရအဆင်ပြေ ပရိဘောဂမလို၊ နိုင်ငံသားနေထိုင်ရန် Rental Price-5lkh အိမ်ရှင်များတိုက်ရိုက်အပ်နှံနိုင်ပြီး အကျိုးတူမောင်နှမများလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် MP အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် 09 952111337 mprealestateservice@gmail.com
MP Real Estate Service
Looking for Condominium - 1,500 Lakh
ကမာရွတ်မြိုနယ်၊မာလာမြိုင်အိမ်ရာတွင် အမြန် ၀ယ်လိုသည် မာလာမြိုင်လမ်း၊ စိန်ဂေဟာနောက် ဓာတ်လှေကားနှင့် ကားပါကင်ပါသောတိုက် ဈေးနှုန်း -၁၀၀၀ မှ ၁၅၀၀ သိန်း သုံးမည် အိမ်ရှင်များတိုက်ရိုက်အပ်နှံနိုင်ပြီး အကျိုးတူများလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် MP အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် 09 952111337 mprealestateservice@gmail.com